पक्कै पनि हरेक महिला एक पातलो आंकडा बढाउनका क्रममा लोकप्रिय आहार प्रयोग। यसबाहेक, fairer सेक्स को धेरै, यस्तो तरिका अक्सर उपचार संग सम्बन्धित छन्। तथापि, विशेषज्ञहरु सामान्य आहार को एक अल्पकालीन अधित्याग प्रत्याभूति परिणाम दिन छैन, कि र कहिलेकाहीं पनि वजन साथै एक तीव्र फिर्ती provokes भन्छन्। यो महिला को विशाल बहुमत धेरै कडे लोकप्रिय आहार प्रयोग भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिनुहोस् छैन असंभव छ, त्यसैले तिनीहरू breakdowns अक्सर आउँदैन।
यो कसरी भीषण सर्कल बाहिर प्राप्त गर्न? आफैलाई कसरी उत्प्रेरित र सुन्दर प्रकारका मालिक बन्न?
कसरी एक आहार तल bogged गर्न? दुर्भाग्यवश, यो प्रश्नको जवाफ छैन हरेक महिला सक्छन्। छन् धेरै किन विशेषज्ञहरु गर्न खोल्दै छ।
योग्य र योग्य nutritionists लगातार परिणाम मात्र दीर्घकालीन शक्ति सिस्टम आफूलाई रोजेका गर्नुपर्छ प्राप्त गर्न भन्छन्। कारण के हो? जोखिम मा दूरी जाने भन्ने तथ्यलाई एक कठोर आहार धेरै उच्च छ। तसर्थ, भोक हडताल र अवरोधहरू को चक्र मा आफूलाई ड्राइव छैन। यो समस्याको तर्कसंगत समाधान बरु एक स्वस्थ जीवन शैली छ जो लामो र नरम आहार, हुनेछ।
वजन कम गर्न प्रेरणा
कसरी छैन आहार तल bogged गर्न र इच्छित परिणाम हासिल? यो प्रश्न बहु-faceted र धेरै नाजुक छ। फलामको इच्छा भएका केही महिला, तिनीहरू केवल कमजोर र अल्छी छन् कि, एक सुडौल आकार भएका निरन्तर निन्दाले ती। तर यो साँचो हो। वास्तवमा, एक आदर्श आंकडा लागि इच्छा यी प्रतिनिधिहरु धेरै बलियो छ। तर, यी लक्ष्य इच्छा सधैं पर्याप्त छैन हासिल गर्न। यो पनि र प्रेरणा आहार हुनुपर्छ। यसलाई प्राप्त गर्न, यो तपाईं वजन खोने छन् के निर्णय महत्त्वपूर्ण छ। एक महिला सम्भवत खुसी, वा एक हलिउड स्टार जस्तै हुन कसैले, त्यसपछि चाहन्छ भने, यो काम गर्ने छैनन्। तसर्थ, एक सानो फरक आफैलाई उत्प्रेरित गर्न।
चाल र सुझावहरू
एक आहार तल bogged गर्न कसरी गर्न को प्रश्नको जवाफ, तपाईंले के आफैलाई लागि निर्णय गर्नुपर्छ वजन गर्न चाहन्छु। यो ghostly छवि मा छैन भर आवश्यक छ, तर यसको आफ्नै आदर्श मा। कसरी यसलाई के गर्ने? पक्कै पनि सबैलाई कहाँ यसलाई थप पातलो र सुन्दर छ, पहिले 5, 10 वा 15 वर्ष को तस्वीर छ। धेरै मानिसहरू ठूलो दुःख र आफूले पछुतो मान्ने तिनीहरूलाई हेर्न। र यो व्यर्थमा छ। सबै पछि, तपाईं जवान हेर्न सकेनौं भने यो एकदम सम्भव वजन छ।
कसरी एक आहार तल bogged गर्न? एक विशेष लक्ष्य, तपाईं पक्कै पनि सफल वजन पछि पुग्नेछ जो आफै लागि यो चिन्ह गर्न। यहाँ एउटा उदाहरण हो। यदि तपाईं वजन प्रभावकारी हानि हो:
ठूलो (तंग छोटकरीमा र अति-छोटो स्कर्ट मा) कुनै पनि outfit गर्न नजर बन्न;
अब उनको एक तस्वीर को लागि एक पोज खोजी हुनेछ, तपाईं धेरै ठूलो हेर्न भएन;
तपाईं सधैं राम्रो महसुस र सास को shortness बारेमा भूल हुनेछ;
तपाईं लगातार शरीर र ऊर्जा एक फट मा vivacity, प्रकाश महसुस हुनेछ;
ईर्ष्या थप पातलो र सुन्दर महिला रोक्न;
तपाईं ऐनामा सहित आफैलाई मन सुरु;
खेल र धीरज, साथै बन्न सजिलो-जाँदै;
तपाईं भोक हडताल punishing र निराशा मा झर्ने, हरेक विफलता लागि आफूलाई दोष छैन;
पूर्णता पुग्न, तपाईंलाई रोचक कुराहरू थप समय हुनेछ।
यी सबै वाक्यांश पहिलो व्यक्ति मा बारम्बार गर्न भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ, र हरेक दिन यो के।
पातलो त्रुटि मानिसहरू
एक आहार कसरी धान्न? वजन प्रभावकारी हानि आफैलाई प्रेम हुनुपर्छ र आफ्नो शरीर कुनै पनि समय छ। तपाईं अहिले आफूलाई एक अनिच्छा अनुभव भने, एक आदर्श को रूप मा रुचि छैन। त्यसैले, आफ्नै किलोग्राम को घृणा एक प्रेरणा छ। त्यसको विपरीत, तपाईं आफैलाई तपाईं लगातार राम्रो र राम्रो प्राप्त गर्न, सुधार गर्न चाहन्थे कि धेरै माया छ।
तपाईं आहार तालिका अघि, आफैलाई भन्न तपाईं वजन गर्न आवश्यक किन? यस प्रकारको आन्तरिक संवाद तपाईं सबै जरुरी समस्या पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ, तपाईं आफ्नो गल्ती काम गर्न सक्षम हुनेछ। यस मामला मा, तपाईं विश्वस्त महसुस र अलग गिर गर्न बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।
केही विशेषज्ञहरु तपाईं वजन पछि पाउन भनेर र बेफाइदा सूची लेख्न सुझाव दिन्छौं। एकै समयमा हामी (हरेक5किलो लागि आफैलाई एसपीए-केन्द्र एउटा टिकट प्राप्त, उदाहरणका लागि, महंगा पोशाक, आदि किन्न) सकारात्मक परिणाम लागि पुरस्कार बारे बिर्सनु हुँदैन। यो तपाईं पालन-अप गति एक प्रकारको दिनेछु।
खाने को लागि के खान? छुट्टी तालिका मा व्यवहार कसरी गर्ने? खाना को ठूलो मात्रा को अवशोषण प्रतिरोध कसरी गर्ने? हरेक दिन आफैलाई यी प्रश्नहरू सोध्नु छैन, यो एक सानो स्त्री wiles गर्न Resort गर्न सिफारिस गरिएको छ। आफ्नो उत्सव तपाईंलाई मदत गर्नेछ।
रक्सी र कैफीन जोगिन। यो यस्तो पेय भोक जगाउन र adversely चयापचय प्रक्रियाहरू असर ज्ञात छ।
महत्त्वपूर्ण आवेग रोचक र उपयोगी पेशा।
थप सकारात्मक (तनाव जोगिन)। नकारात्मक भावना - कि एक खाजा बन्द गर्न कुनै कारण छ। Overvoltage एक सना, मसाज भ्रमण वा एक यात्रा गर्न राम्रो छ।
धेरै खुशी साथ र साना अंश मा स्वास्थ्यकर खाना खान गर्नुपर्छ।
यो एक रोमाञ्चक र रोचक शौक फेला पार्न महत्त्वपूर्ण छ। यस्ता गतिविधि खाना सोचिरहेका तपाईंले विचलित गर्न सक्नुहुन्छ।
पैसा को लागि विवाद प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं को एक निश्चित संख्यामा किलोग्राम को निश्चित संख्या रिसेट गर्न निश्चित हो कि, आफ्नो मित्र को कुनै एक शर्त बनाउन प्रयास गर्नुहोस्। , अन्यथा तपाईं केही मात्रामा भुक्तानी गर्न हुनेछ तपाईंको वचन पालन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
अनलाइन डायरी राख्नुहोस्। त्यसैले व्यक्तिले आफ्नो उपलब्धिहरू हजारौं थाहा छ भने, इरादा बाटो ले हटना छैन सजिलो छ कि खुलेको छ।
हामी वजन गर्न आदर्श तरिका प्रेम छ भनेर भन्न सक्दैन। पहिलो, महिला को विपरीत सेक्स सोख को अवधिमा खाना पकाउने लागि समय छैन। दोश्रो, कहिलेकाहीं म एक समयमा खान चाहँदैनन्। तेस्रो स्थानमा आफ्नो नयाँ सधैं चुनिएको अगाडि चाहनुहुन्छ सुन्दर हेर्न।
, को कमजोर सेक्स, नयाँ सम्बन्ध मा प्रवेश को प्रतिनिधिहरु किन पनि छैन मात्र खुसी, तर सुन्दर हेर्न छ।
आहार के भने गिर?
यस प्रश्नको जवाफ मात्र एक विशेषज्ञ हुन सक्छ। अवरोध - यो एक धेरै साधारण घटना जब एक कठोर आहार छ। कठिन अवस्था exacerbate छैन क्रममा, निम्न नियम पालन गर्न निश्चित हुन:
घाटी जारी छैन। धेरै सकेसम्म विफलता को दिन मा, भोजन को पछि प्रयोग गर्न आफैलाई सीमित।
शान्तपूर्वक र निर्धक्क भई थप आहार पालना गर्नुहोस्। र त्यसो गर्न, तर आज देखि भोलि छैन आवश्यक छ।
कुनै मामला मा आफैलाई दण्ड छैन। तपाईं slightest misstep आफैलाई भोकभोकै पर्छन् हुँदैन। प्रेम र आफैलाई विश्वास गर्छु।
घण्टा वा चालीस मिनेट तीव्र कसरत गरेर जिम वा घर बाहिर आफ्नो स्टलको काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
मा वजन र यसको मात्रा माप लिन। तपाईं आफ्नो स्टलको कति चोट थाहा गर्न केही दिन पछि यो प्रक्रिया दोहोरिन। परिणाम थप एक प्रेरणादायी कारक लागि हुनेछ।
अब तपाईं एक आहार उतर भने के थाहा। खाना को ठूलो मात्रा मुख्य कुरा को अवशोषण मा - समय मा रोक्न। यो पनि गर्नुपर्छ आफैलाई पुन: उत्प्रेरित र पहिले प्राप्त आफ्नै परिणाम प्रेरित गर्न।
वजन कसरी गुमाउन र अतिरिक्त किलो बढाउनका छैन, खाने को लागि खान? यी प्रश्नहरूको आफूलाई लगभग हरेक महिला सोध्छन्। तपाईं एक पातलो शरीर को पकड ठ्याक्कै कसरी प्राप्त गर्न थाहा छैन भने, यो विशेषज्ञहरूका सम्बोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ। आखिर, मात्र अनुभव nutritionists एक व्यक्ति खानाको योजना लागि विकास गर्न सक्छौं, साथै breakdowns रोकन मा सल्लाह दिन। डाक्टर र willpower व्यायाम को सिफारिसहरू सबै निम्न गरेर, तपाईं, तपाईंको लक्ष्य पुग्न स्लिम र सुन्दर बन्न पक्का छन्।
घर मा स्नेहक कसरी बनाउने?
छोराछोरीको लागि प्रतिरक्षालाई कसरी सुदृढ बनाउने: आमालाई सिफारिसहरू
त्रुटि "फोल्डर वा फाइल क्षतिग्रस्त छ पढ्न सकिँदैन।" - के?